UMBONO: Kuhle yini ukuthi ifakwe emgqonyeni impahla yabadayisa emgwaqeni? | News24
UMBONO: Kuhle yini ukuthi ifakwe emgqonyeni impahla yabadayisa emgwaqeni?
eThekwini - Sicasule abaningi isenzo samaphoyisa omgwaqo kuMasipala weTheku ngokulahla impahla yalabo abadayisa emgwaqeni.
Lawa maphoyisa abonakale emigwaqeni yaleli dolobha afaka ama-glove okukhuculula udoti, ethatha impahla yalabo okukholakala ukuthi badayisa ngokungemthetho.
Yize babodwa bakhala ngokuthi kubuhlungu okwenziwa amaphoyisa ngoba abantu bazizamela imali yokundla imindeni yabo, abanye bakhala ngokuthi kungani abantu bengafuni ukulandela umthetho babhalise ngokusemthethweni uma befuna ukudayisa.
OUUNYE UDABA:Uyalelwe ukuba ahlanze udoti wakhe omoshele phansi
“Bayahlupha abantu abangafuni ukulandela umthetho bese bekhala ngokuthi bahlukunyezwa ngamaphoyisa. Abanjani okumele bakhokhe ukuze basebenze, abanye bebe befuna ukusebenza mahhala ngaphandle kwemvume.
“Iyacika lento ngoba uthola sekunesiminyaminya esikhulu emgwaqeni yasedolobheni kungasahambeki, kanti kugcwele abantu okungafanele babe lapha,”kusho umthombo weZindaba24 uzibonele ngawakhe.